khilaaf ka taagan Qiyaasta tirakoobka dadweynaha dalka oo ay dowladda Soomaliya shaacisay – Radio Daljir
khilaaf ka taagan Qiyaasta tirakoobka dadweynaha dalka oo ay dowladda Soomaliya shaacisay
Maajo 27, 2015 2:58 b 0
Arbaco, May 27, 2015 (Daljir) —Munaasabad lagu soo bandhigay Tira-koobka Shacabka Soomaaliyeed ayaa shalay lagu Qabtay Magaalada Muqdisho, iyadoo Xafladdaan ay soo qaban-qaabisay Wasaarada qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, iyadoo natiijadan lagu sheegay sahanka Qiyaas ah oo lagu saleeyay 18-ka gobol ee Soomaaliya ay ka koobnayd ka hor sannadkii 1991-kii.
Xafladda ayaa waxaa ku sugnaa Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Somalia, Maxamed Cumar Carte Qaalib, Wasiirka Qorshaynta, C/raxmaan Caynte Wasiir-ku-xigeenno, Xildhibaanno iyo Marti sharaf kale.
Sahankan oo ay samaysay Wasaaradda Qorshaynta intii u dhexeysay 2013-kii iyo 2014-kii ayaa lagu sheegay in Qiyaasta dadka Soomaaliyeed ay yihiin; 12,316,895 (Laba iyo Toban Milyan, Saddex Boqol & Lix iyo Tobaatan Kun, Sideed Boqol & Sagaashan & Shan Qof).
Wasiirka Qosheynta Soomaaliya , C/raxmaan Caynte ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee maanta lasoo bandhigay tiradooda ay 5% yihiin Rag, halka 75% ay yihiin kuwo ay 30-sano ka yar tahay da\_’dooda, 10% ay yihiin Barakacayaal, 26% ay yihiin Reer Miyi, iyadoo tira-koobkan aysan ku jirin Soomaalida Qurbaha ku maqan.
Gobollada ay ku Nool yihiin Dadka ugu Tirada badan ayaa lagu kala Sheegay inay yihiin shan gobol oo kala ah; Banaadir, Waqooyi Galbeed, Shabeelaha Hoose, Bay iyo Tagdheer. Halka Shanta Gobol ee ugu dadka yar ay yihiin; Sool, Jubadda dhexe, Bakool, Nugaal iyo Jubbada Hoose.
Mas’uuliyiinta Xukuumadda Somalia ayaa xusay in tirakoobkan lagu saleyn doono dajinta miisaaniyadda dalka, Qorista shaqaalaha dowladda Somalia, ciidamada iyo sida gobollada kala duwan ee dalka loo kala geynayo shaqaalaha dowladda.
Agaasimaha waaxda cilmi-baarista iyo tira-koobka ee Wasaaradda Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Soomaaliya, Axmed Cilmi ayaa sharaxay Qaabka loo sameeyay Sahankan Qiyaasta ah ee tirade Dadka Soomaliyeed, wuxuuna yiri.
“Xogtan waxaa laga soo aruuriyay tusaale ahaan miyiga, tuulooyinka, Degmooyinka iyo goobaha barakacyaasha, waxaa lagu tiriyay aalad la yiraahdo Circling Frame oo casir ah, waana qaab aan dadka oo dhan loogu tirin mid-mid; waana sidaas sida loo sameeyay tira-koobka.”
Prof. C/llaahi Sheekh Cali (Qaloocow) oo ah wasiir-ku-xigeenka wasaaradda ayaa sheegay in tiradan lasoo bandhigay ay tahay qiyaas, ayna tahay muhiim in maanta la hayo qiyaasta tirada dadka Soomaaliyeed.
“Maanta inaan haysanno Qiyaasta tirada dadka Somalia sida; Ragga, Haweenka, Carruurta, Dhallinyarada iyo Waayeelka waa muhiim; iyadoo wax weyn ka-tari-doonta Horumarinta ummadda Soomaaliyeed,” ayuu sheegay Prof. Qaloocoow.
Sidoo kale, Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soalia C/raxmaan Yusuuf Cali Ceyte oo ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in Qiyaastan lagu sameeyay tirada dadka Soomaaliyeed aan lagu saleyn siyaasad, balse ay tahay mid lagu saleeyay Cilmi.
“Tiro-koobkan ma ahan xog ku saleysan siyaasad ee waa mid cilmi iyo Aqoon ku saleysan, si Cilmiyeysan ayaana loosoo Bandhigay, marka waa in la isku Qaldin wixii Cilmi ah; isla markaana aan la siyaasadeyn tira-koobka, macanaheeduna ma ahan inay tahay mid xaqiiqo ku saleysan,” ayuu yiri Caynte oo intaas ku daray in turxaan bixin dheeraad ah lagu saleyn doonto tira-koobkan.
Caynte ayaa hadalkiisa ku daray in ururinta tira-koobkan lasoo bandhigay uu yahay mid ay kawada Qayb-qaateen maamullada dalka ka jira iyo weliba hay\_’adaha samafalka, isagoo ku sheegay hadalkiisa inuusan ahayn mid ay iyagu uun iska sameysteen.
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Somalia, Maxamed Cumar Carte oo isaguna ka hadlay munaasabadda ayaa xusay inay tahay wax lagu farxo in maanta la helo Xogta tirada dadka Soomaaliyeed la xariirta, ayna sahlayso in sannadka 2016-ka la qabto doorashooyin.
“Waxaa kaloo iyana jirta waxaa la gala marxaladda cusub ee 2016-ka, waxaana loo baahan yahay marka doorasho la galayo in wax laga duulo, Waana Tirada Dadka Soomaaliyeed ee aanu maanta helnay,” ayuu yiri Carte.
Tira-koobkii ugu dambeeyay ee Somalia laga Sameeyay Sannadkii 1975-kii ayaa lagu sheegay in tirada dadka Soomaaliyeed ay tahay 8-Milyan, iyadoo Tira-koobkan uu noqonayo kii ugu horreeyay oo lasoo bandhigo wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Ugu dabayn, tirkoobkan waxa ka soo horjeesatay dowladda Puntland oo ku sheegtay in uu ahaa waxba kama jiraan.
Xubno ka tirsan FIFA oo lagu xidh-xidhay Switzerland
Ray-sul wasaare Cumar Cabdirashid oo si aan loo kala harin loogu soo dhaweeyay Kismaayo